Khayre oo Kormeer ku tagay Xarumaha Ciidanka Booliska Somaliyeed (Sawiro) – Radio Daljir
Khayre oo Kormeer ku tagay Xarumaha Ciidanka Booliska Somaliyeed (Sawiro)
Luulyo 3, 2018 6:14 g 0
Taliska guud ee Ciidanka Booliska federaalka ee Muqdisho ayaa xaruntooda ku soo dhaweeyay maanta Ra’iisul wasaraaha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre,oo kormeer shaqo ku tegay xarunta Booliska.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, Saraakiil ka tirsan Ciidankaasi iyo cutubyo ka tirsan Booliiska ayaa ra’isul wasaaraha ku soo dhaweeyay, iyagoo salaan sharaf siiyay.
Kormeerka waxaa R/wasaare Kheyre ku wehliyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane C/raxmaan Cumar Yariisoow, Wasiir ku xigeenka Amniga gudaha iyo Taliye ku xiggeenka NISA, waxayna kulan looga hadlayey dardar gelinta Ammaanka la qaatay Sarreeyeyaasha iyo Saraakiisha Ciidanka Booliska.
Ra’iisul wasaraaha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka hadlay kulankaasi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii adkeeyo Amniga dalka, waxaana Ciidanka Booliska Soomaaliyeed uu ku ammaanay inay ku guuleysteen sugiga amniga magaaladda Muqdisho, waxaana uu kula dardaarmay in la sii dardar geliyo shaqada.
Shacabka Qardho iyo Arragtidooda Xayiradda dhinaca Xoolaha ee laga qaaday Somaaliya dhegayso)